25 တူညီသည့်အ Windows ကို 10 ပြဿနာတွေနဲ့ဘယ်လိုသူတို့ကို Fix ဖို့ | Caseguru
25 တူညီသည့်အ Windows ကို 10 ပြဿနာတွေနဲ့ဘယ်လိုသူတို့ကို Fix ဖို့ Posted by ကို : ဂျေးအလီ ဂျေးအလီ
သြဂုတ်လ 3rd, 2015 မှတ်ချက် Leave
Newz, သိကောင်းစရာများနဲ့နည်းပြသင်ခန်းစာများ, tutorials
53မီးရောင်လက်ခြင်း
Windows ကို 10 အားလုံးနှင့်များစွာသောအသုံးပြုသူများမှယခုရက်အနည်းငယ်ထားပြီးတပ်ဆင်ခနှင့်အတူများစွာသောပြဿနာသတင်းပို့ကြသည်ကတည်းကယခုရရှိနိုင်ပါသည်, သံကို, လုံခြုံရေးစသည်တို့ကို. this post မှာ Windows အကြောင်းကိုပြောမည် 10 ပြဿနာများနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုပြုပြင်ဖို့.
#1 Windows ကို 10 System လိုအပ်ချက်
ဒါကနိဒါနျး၏ပို, ဒါပေမယ့်သင်တပ်ဆင်ခအပေါ်သို့မလိုအပ်သောကိစ္စရပ်များကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုလျှင်သိရန်အရေးကြီးပါတယ်. သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအချို့သောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူတန်းတူအထိဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်. ဒီနေရာတွင် Microsoft ကလိုအပ်သောကျန်တာတွေင့်:
တစ် processor ​​ကို 1 gigahertz (GHz) သို့မဟုတ်ပိုမြန်
1 Gigabyte (GB အထိ) (32-နည်းနည်း) သို့မဟုတ်2GB အထိ (64-နည်းနည်း) ရမ်
16 အခမဲ့ hard disk space ကိုများ GB အထိ
Microsoft က DirectX9WDDM driver ကိုအတူဂရပ်ဖစ်စက်ကိရိယာ
Microsoft ရဲ့အကောင့်နဲ့အင်တာနက် access ကို
#2 Windows ကို 10 download လုပ်မည်မဟုတ်
Windows ကို 10 download လုပ်မည်မဟုတ်
Windows ကိုသူသုံးစွဲသူများက 7, 8 သို့မဟုတ် 8.1 Windows ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်မည်ထင်ကြသည် 10 အလိုအလျောက် taskbar ပေါ်မှာ system tray ထဲမှာတစ်ဦးအဆင့်မြှင့် icon ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်. သို့သော်, အချို့သောအသုံးပြုသူများ download, အတူအခက်အခဲရှိခဲ့, သို့မဟုတ်သေးက download လုပ်ခွင့်ရကြပြီမဟုတ် (အင်တာနက်ကိုမချိုးပါဘူးဒါကြောင့် Microsoft ကတဖြည်းဖြည်းအဆင့်မြှင့်တင်ထုတ်လူးသည်).
အများအားဖြင့်, Windows ကိုသင်၏လက်ရှိထုတ်ဝေပြည့်အဝ updated မဟုတ်သောကွောငျ့ထိုပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်, နဲ့ Windows Update ကို run ပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်.
ကပျက်ကွက်သင့်ပါတယ်, သင်ပြဿနာပတ်ပတ်လည်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် Microsoft ရဲ့ Windows ကိုသုံးခြင်းဖြင့် 10 မီဒီယာကို download tool ကို. ဒါဟာ operating system ကိုတစ် .ISO file ကို download လုပ်ပါလိမ့်မယ်, အရာကို USB drive ကိုသို့မဟုတ်ထို့နောက်ခြစ်ကနေ operating system ကို install လုပ်မယ့် DVD ကိုပေါ်တင်ဆောင်နိုင်.
#3 Windows ကို 10 activati​​on ကိစ္စများကို
Windows ကို 10 activati​​on ကိစ္စများကို
ကံအသုံးပြုသူများကို Windows ၏အစောပိုင်းနေ့ရက်ကာလ၌အစီရင်ခံကြသည်အခြေခံအကျဆုံးပြဿနာ 10 က install လုပ်ထားပြီတခါဆော့ဖ်ဝဲမှုဖှငျ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်. ဒီထက်ပိုပြီးအခြေခံကျပြဿနာစိတ်ကူးဖို့ခဲယဉ်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်သဘာဝဤနောက်ဆုံးသောနေ့၌သို့မဟုတ်ဒီတော့ကျော်အင်တာနက်ဖိုရမ်များအပေါ်အချို့သောမဟုတ်ဘဲ testy တုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်.
သို့သော်, မှတ်ပုံတင်ရန်အတည်ပြုကိစ္စရပ်များကိုသံသယမရှိသော်လည်းစိတ်ရှုပ်စရာ, Windows ရဲ့မှု 10 အတော်လေး painlessly သူတို့ကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. တကယ်ပါပဲ, Microsoft ကလူသိရှင်ကြား activati​​on နှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်အရေးကိစ္စများကိုတကယ်တော့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမိမိကိုယ်ကိုဖြေရှင်းသင့်ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့သည်. ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့် Windows ရဲ့တို့တွင်အမှုဖြစ်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ 10 အသိုင်းအဝိုင်း, သို့သော်လည်းအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်မည်သို့ပင်ဆိုစေကြာရှည်ခံအခက်အခဲများကြုံတွေ့ကြ. အမြဲဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုလွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူကွဲလွဲချက်များရှိလိမ့်မည်, သော်လည်း, နှင့်ဤပြဿနာကြုံနေရသောသူတို့အဘို့သံသယမရှိတစ်ဦးအကြံပြုပါရစေလမ်းကြောင်းတပ်ဆင်ရန်နှင့်ထပ်ကြိုးစားမှရိုးရိုးဖြစ်ပါသည်.
#4 Windows ကို 10 automatic updates များ
Windows ကို 10 automatic updates များ
လူတွေအများအပြား Microsoft ရဲ့အသစ် update ကမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါပြီ. Windows ကိုမှနောက်ဆုံးအခြေအနေများ 10 မဖြစ်မနေများမှာ, ဒါကြောင့်သင်ဒေါင်းလုဒ်သူတို့ကိုကို install ထဲကရွေးချယ်လို့မရပါဘူး. သင်တို့ကိုနောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေးအတွက်ပြင်ဆင်ဖာထေးခြင်းနှင့်ကျွနုပ်နှင့်အတူတည်ငြိမ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုဆိုလိုတာသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အချိန်တိုင်းကပြဿနာဖြစ်စေမယ့်. ကျနော်တို့ပြီးသား Windows Update ကိုနှင့် Nvidia ၏နောက်ဆုံးပေါ်ယာဉ်မောင်းများအကြားပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်တိုက်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်, အဆိုပါကိစ္စကိုအလျင်အမြန်ပုံသေခဲ့သော်လည်း. Microsoft ရဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုမှတစ်ဆင့် sneaking အဆိုပါထူးဆန်း bug ကိုလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပါတယ်.
သင်သည်ဤမှဦးမယ်ဆိုရင် Microsoft ကအထောက်အပံ့စာမျက်နှာ သင်တစ်ဦးမလိုချင်တဲ့ယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ် update ကို uninstall လုပ်ဘို့အညွှန်ကြားချက်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ကိုလည်းသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် "Show သို့မဟုတ်ဝှက် updates ကို" Troubleshooter package ကို. ဒါကြောင့် Download, ဒါကြောင့်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်, ကိုထိပုတ်ပါ updates တွေကို Hide, ပြီးနောက်သင်အလိုအလျှောက် install လုပ်ချင်ကြပါဘူးအတွက် updates ကိုစစ်ဆေး. သင်တို့၌အစဉ်နောက်မှထံသို့ပြန်လာနှင့်အသာပုတ်နိုင်သည် ဝှက်ထားလျက်ရှိသော updates ကိုပြရန် ပြီးနောက်သင်ပြီးနောက်အားလုံးတပ်ဆင်ချင်ပါဘူးခင်ဗျားဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဘာမှ uncheck.
သင် update ကိုဝန်ဆောင်မှုပိတ်ဆို့အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်ကနေကာကွယ်တားဆီးဖို့ firewall ကိုအသုံးပြုတယ်. ဤပြဿနာကိုသင်တစ်လအတွင်းတဆင့်လာသော updates ကိုလက်ခံရန်မဟုတ်လျှင် Microsoft ကအနာဂတ် updates တွေကိုလက်လှမ်းမီဖြတ်တဲ့မူဝါဒရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်. နောက်တခါသင်တို့ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းခံခဲ့ရသည်ကို updates ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင် Access ကတဘက်ကဲ့သို့ပကတိဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ပဲ update ကိုဘယ်လောက်တည်ငြိမ်ထွက်ရှာဖို့အချို့သောအချိန်ကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းဖြစ်နိုင်.
#5 Windows ကို 10 အသံပြဿနာများ
Windows ကို 10 အသံပြဿနာများ
သင်က Realtek ယာဉ်မောင်း၏ installation နှင့်အတူပြဿနာများရှိပါက, VIA HD ကိုတိုက်တွန်း Audio နှင့်အတူအပြည့်အဝအသံဖိုင်အတွေ့အကြုံကိုမရကြ, သို့မဟုတ် Conexant အသံဖိုင်နှင့်အတူကိစ္စများကိုများ, သင်ကြိုးစားမှတစ်ဦးပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်ရှိပါတယ်.
ရဲ့ပြောင်းပြန်နိုင်ရန်အတွက်ဤသုံးပါးကိစ္စရပ်များမှာကြည့်ကြရအောင်. Conexant အသံဖိုင်နှင့်အတူတစ်ဦးပြဿနာသင်က Windows အတွက်အသံမနားထောင်မည်အကြောင်းဆိုလိုတယ် 10 ပင်သော်လည်းအရာခပ်သိမ်း ပေါ်လာ မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ခံရဖို့. ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်နေချိန်မှာ, Microsoft က msconfig.exe ကို run နှင့်မှ Boot tab ကိုမှဦးတည်အကြံပေး. အဆင့်မြင့် options ကို click, ထိုအများဆုံးချက်မှတ်ထားမှု box ကိုစစ်ဆေးနှင့်မှတန်ဖိုးသတ်မှတ် 3072.
သင် VIA HD ကိုတိုက်တွန်း Audio များနှင့်သင်သာအချို့သောအက်ပ်များမှသံကိုကွားနိုငျကွောငျးတှေ့ခဲ့လျှင်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရှိပါတယ် ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန် သင့်အတွက်. ပွင့်လင်းပြန်လည်ဖွဖုန်းများအတွက်, ညာဘက်အသံထွက်ရှိမှု device ကို click နှိပ်ပြီးကို default device အဖြစ်တင်ထား. ဤအမှုကိုပြုသောအတူ, အဆိုပါ device ကိုရွေးပါ, Properties ကိုဝင်တိုက်, ထိုအဆင့်မြင့်တင်မှု tab ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် Disable လုပ်ထားအားလုံးအဆင့်မြှင့်တင်မှုများ option ကိုစစ်ဆေး.
နောက်ဆုံး, သင်ကပြဿနာ Realtek အသံဖိုင်ကားမောင်းသူတပ်ဆင်ခနှင့်အတူအနှောငျ့အလျှင် — အထူးသဖြင့်တစ်ဦး 0x000005b4 အမှား — သင်ထုတ်ဝေနေတဲ့ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်ကြိုးစားနိုင်ပါ ကျောက်ခေတ်ပံ့ပိုးမှုစာကြည့်တိုက်. တပ်ဆင်ရန်တော့ဘူးဒရိုင်ဘာပေးရန် Group Policy Editor ကို အသုံးပြု. တစ်လမ်းညွှန်ရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်သင်ကလစ်နှိပ်နေတဲ့စုံတွဲနှင့်အတူအရပျ၌အသစ်သော setting ကိုတင်မယ့် registry ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. ဤအမှုကိုပြုသောသိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်ထို့နောက် re-ကြိုးစားဒရိုင်ဘာတပ်ဆင်ခနိုင်.
#6 Windows ကို 10 အတင်းအဓမ္မ updates တွေကို system ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်ပွားစေ
ထိုအတင်းအဓမ္မ updates များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာသူတို့သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ crash နိုင်ကြောင်း.
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို reboot လုပ်အမှုဖြင့်အမှုအပေါ်ကပြုပြင်သင့်တယ် အခြေခံ. ခင်ဗျား စတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေမယ့်ဒရိုင်ဘာကို uninstall လုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်.
#7 Windows ကို 10 Chrome မှာကိစ္စများကို
Windows ကို 10 Chrome မှာကိစ္စများကို
အများစုကအသုံးပြုသူများကိုလည်းနှင့်အတူအစောပိုင်းပြဿနာများသတင်းပို့ကြသည် Chrome မှာ browser ကို. Microsoft က Edge browser ကိုများလွှတ်ပေးရေးနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက် browsing အားထုတ်မှု repackage ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့, ဒီနေဆဲကော်ပိုရေးရှင်းသည်သံသယမရှိသတင်းဆိုးသည်. Chrome မှာအမာခံအင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့်အတူလူကြိုက်များတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်သိရသည်, နှင့်ဤအတိအကျကို Windows operating system ရဲ့အစောပိုင်းမွေးစားခဲ့ကြမှသဘာဝဖွယ်ရှိနေသောလူမျိုး၏မျိုးရှိပါတယ်.
ကံမကောင်းသဖြင့်, အများအပြားက Chrome browser ကိုအသုံးပြုသူများပြဿနာတွေကိုတစ်ခုလုံးဖောင်တစင်းခံစားနေကြ, bogging နှင့်အထူးသဖြင့်ပျံ့နှံ့စဉ်းစားဆော့ဗ်ဝဲနှေးနှင့်အတူ. ဒါဟာ Chrome browser အချို့ download သည်ပုံရ, ထိုကဲ့သို့သော video streaming ကဲ့သို့သော processor ​​ကို-intensive တာဝန်များကိုရိုးရှင်းစွာလည်ပတ်မဟုတ်, သူတို့ရွက်ဆောင်စေရမည်အဖြစ်.
ဒါဟာဆက်ဆက် Microsoft ကအချိန်ကြာအလုပ်လုပ်သည့်ကိစ္စဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ကြုံတွေ့မည်သည့် Chrome ကိုကိစ္စများအတွက်အစောပိုင်းပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန် browser ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံး extensions တွေကိုသတ်ပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်. Windows ကိုမှဆက်စပ်သောပြဿနာတွေအားလုံးကိုနှင့်ဝသကဲ့သို့ 10, Chrome ကို uninstall လုပ်နှင့် reinstalling ၏အကြံပြုချက်ကိုလည်းထင်ရှားတဲ့တယောက်ခဲ့, မည်သည့်အခက်အခဲသက်သာစေနိုင်ကြောင်းကိုကူညီနိုင်မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းစနစ်.
#8 Windows ကို 10 အတင်းအဓမ္မ updates တွေကို software ကိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားစေ
Windows ကို 10 အတင်းအဓမ္မ updates တွေကို software ကိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားစေ
အဆိုပါအတင်းအဓမ္မ updates ကိုဝေးသဖြင့် Windows ကို၏ trickiest ရှုထောင့်တွေက 10. တစ်ဦးက Windows update ကိုတတိယပါတီမောင်းသူစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကို update ကိုအတူတိုက်ဆိုင်သည့်အခါသေးဖြစ်ပွားနိုင်သည်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကလေယာဉ်ပျက်ကျစေနိုင်ပါတယ်. တတိယပါတီ software ကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့် Windows က update ကိုမနိုင်.
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားဖယ်ရှားရန်တတိယပါတီမောင်းသူစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပါသည်နဲ့ Windows အားလုံး system ကို updates ကိုဂရုစိုက်အသိပေး, Microsoft ကအခြားကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်အပေါ်အာဏာပေးသော.
#9 Windows ကို 10 အကြိုက်ဆုံးပျောက်ကွယ်
Windows ကို 10 အကြိုက်ဆုံးပျောက်ကွယ်
Internet Explorer သည်ကမ္ဘာအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲအရှိဆုံး reviled အပိုငျးပိုငျးတစျခုခဲ့သည်, နှင့် Microsoft နောက်ကျတာထက်ကိုပိုပြီးက update လုပ်ဖို့တော်တော်အများကြီးတာဝန်-ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ခဲ့. ထိုသို့အသစ်တခုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါသည် edge browser ကို, နှင့်ဤအစီအစဉ်မှအစောပိုင်းတုန့်ပြန်သောကြောင့်သိသိသာသာ၎င်း၏အင်တာနက် Explorer ကိုယခင်ကထက်တိုးတက်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်.
သို့သော်, အချို့သောအသုံးပြုသူများအကြိုက်ဆုံးသူတို့ရဲ့စာရင်းကိုတည်နေရာပြဿနာများကြုံတွေ့ကြ, လက်ရှိက Internet Explorer ဘုတ်မှတ်ကနေတိုက်ရိုက်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့ထင်နေတဲ့အရာ. သို့သော်, ဖြစ်ရပ်အများစု၌ဤရိုးရိုးလေးတစ်ခုဖော်ထုတ်ခြင်းပြဿနာဖြစ်ပါတယ်. Edge အပေါ်အကြိုက်ဆုံးနေရာချထားနိုင်ရန်အတွက်, မီနူးဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ '' Settings "ကိုနှိပ်ပါရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. '' သွင်းကုန်အကြိုက်ဆုံးမှအောက်ကိုဆင်း’ အခြားဘရောက်ဇာမှ, ယခင်ကအသုံးပြုသွားမည်သော browser ကိုရွေးချယ်ပါ, နောက်ဆုံး '' သွင်းကုန် '' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. ဤသည်ချက်ချင်းထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သင့်ပါတယ်.
#10 Windows ကို 10 Cortana လုပ်မလုပ်
Windows ကို 10 Cortana လုပ်မလုပ်
တချို့ Windows 10 အသုံးပြုသူများဒုက္ခအလုပ်ကို Cortana ရတဲ့ရှိခြင်းပြီ. တချို့လူတွေက Cortana သူတို့ရဲ့တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ဘာသာဖြင့်မရရှိနိုင်ကြောင်းသတင်းစကားများလာပြီ, တစ်ထောက်ခံဒေသတွင်း၌ဖြစ်ရခြင်းနှင့်ထောက်ခံဘာသာစကားသုံးပြီးနေသော်လည်း. အခြားသူများ Cortana ပုံမှန်အားဖြင့်မတွေ့ပြီ, သို့မဟုတ်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်မ.
ပထမဦးဆုံး, ထိုး စတင် > Cortana > မှတ်ချက်စာအုပ် နှင့်သင်အပေါ် Cortana toggle နှင့်ပယ်နိုင်ပါတယ်.
တစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ Settings ကို > အချိန် & ဘာသာစကား. သင်ထိုဘာသာစကား၏တစျခုကို အသုံးပြု. ဖွင့်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သည် - တရုတ် (မျက်မှောက်ရေးရာ), အင်္ဂလိပ် (U.K.), အင်္ဂလိပ် (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု), ပြင်သစ်, အီတလီ, ဂျာမန်, နှင့်စပိန်, နှင့်သင်၏မိန့်ခွန်းအပေါ်ဘာသာစကား pack ကို install လုပ်ပြီးကြောင်း. သင်သည်လည်းတရုတ်ဖြစ်သင့်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသလိုအပ်ပါတယ်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီနိုင်ငံ, အီတလီနိုင်ငံ, စပိန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု.
#11 Windows ကို 10 ပျောက် OneDrive ပညာရပ်ဆိုင်ရာအမှတ်အသား
Windows ကို 10 ပျောက် OneDrive ပညာရပ်ဆိုင်ရာအမှတ်အသား
Microsoft ကကိုမိုဃ်းတိမ်ကို backup service ကိုသောလမ်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်, OneDrive, Windows မှာအမှုအရာ 10. လူတွေအများအပြားကပညာရပ်ဆိုင်ရာအမှတ်အသားရှာတွေ့မှစိတ်ဆိုးလာရှိပါတယ်, အခြေခံအားဖြင့်မိုဃ်းတိမ်၌သိမ်းဆည်းထားသောတစ်ဦးချင်းဖိုင်တွေရဲ့အကြိုသော, ဖယ်ရှားခဲ့ကြ. အပေါ်ယံ, ဒီလူအခြို့တို့ပညာရပ်ဆိုင်ရာအမှတ်အသားအားဖြင့်ရောထွေးခဲ့ကြသောကြောင့်, ပြုလေနှင့် files တွေကိုပြည်တွင်းမှာသိုလှောင်ထားကြသည်ထင်ခဲ့သည်. အဆိုပါစနစ်ယခုရွေးချယ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်, အရာတစ်ဦးချင်း files တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်မှကြိုက်တယ်သူအချို့လူအလိုတော်မမူ, အထူးသဖြင့်ကန့်သတ် storage space နှင့်အတူထုတ်ကုန်များပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေစဉ်.
ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုတဆင့် Go နှင့်သင်လိုချင်တဲ့တစ်ဦးချင်းဖိုင်တွေကိုရှာဖွေ.
သင်က file ကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူတစ်ဦး drive ကိုကြောင့် map နိုင်. သင့်ရဲ့ browser ပေါ်မှာ OneDrive မှ Log in ဝင်ရန်နှင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ files ထို့နောက် CID အရေအတွက် copy (က address bar တွင်တစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် = CID ဟုဆိုလိမ့်မည်). ဒီဥပမာသည်အဖွင့်က CID = 435rty ကပြောပါတယ်ဆိုပါစို့. ဖွင့်လှစ် file ကို Explorer ကို, သွားရ ဤသည်ကို PC, နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ မြေပုံကွန်ယက်ကို drive ကို, "စာတစ်စောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အတွက် pastehttps://d.docs.live.net/435rty". 435rty သင့်ရဲ့ CID အရေအတွက်သည်အဘယ်မှာရှိ. နိမိတ်လက္ခဏာ-In မှာပြန်လည်ချိတ်ဆက် checked သင့်ပါတယ်. သင်၌လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုပါလိမ့်မယ်, ထိုအခါမူကားသင်က File Explorer ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ OneDrive ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သတိပေးခဲ့သည်ခံရ - ကနည်းနည်းနှေးနှေးဖွင့်.
မှတ်ချက် : ဒါဟာနေဆဲတိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင့်အားအရေးကြီးပါတယ်လျှင်, ဒါကြောင့် ပတ်သက်. OneDrive အဖွဲ့ပြောပြ. သင်မှာအကြံပြုချက်များကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် OneDrive ဝက်ဘ်ဆိုက်. သူတို့ကပြန်မယ့်အနာဂတ်အသစ်ပြောင်းခြင်းတွင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာအမှတ်အသားသို့မဟုတ်အချို့သောအခြားရွေးချယ်စရာဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်း.
#12 Windows ကို 10 Folder ကိုမချွတ်
ပြတင်းပေါက် 10 folder ကိုပျက်ကွက်
အချို့ကအစောပိုင်း Windows အတွက် 10 အသုံးပြုသူများကို Windows ကြောင်းအကြံပြုပါပြီ 8 တစျကိစ်စတှငျကိုသစ်ကို operating system ကိုမှသာလွန်သည်. Windows မှာထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည့်အဆိုပါအီးမေးလ်လျှောက်လွှာ 10 လက်ရှိတွင်လက်ရှိအီးမေးလ်စည်းရုံးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုသူများ subfolders ဖန်တီးခွင့်မပြုပေ. ဒီအသုံးပြုသူအများအပြားကအသေးအဖွဲကိစ္စတခုခုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်အကြောင်း, စဉ်တွင်, ဒီတိုင်ကြားချက်ကိုမဖြေရှင်းနည်းလက်ရှိတွင်လည်းရှိ၏.
#13 Windows ကို 10 Mail ကပြဿနာ
Windows ကို previewed င်သူမြားစှာ 10 ဗားရှင်းပေါ်မှာ Windows ကိုမေးလ်ရရှိနိုင်ဟုဆို 8.1 သာလွန်ခဲ့ပါတယ်. သင်ဖိုလ်ဒါနှင့် subfolders ဖန်တီးနိုင်သောကြောင့်ဤသည်, အရာသင်က Windows အတွက်မေးလ် app ကိုမပွုနိုငျ 10 (အနည်းဆုံးယခုကဲ့သို့အ). ပိုပြီးအီးမေးလ်အကောက်ခွန်ကျင့်ချင်သောလူမယ့်အစား Thunderbird ကိုအသုံးပြုနေသည်, အရာ Windows နဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် 10.
#14 Windows ကို 10 ပိုလျှံ bandwidth ကိုစားသုံးမှုပြဿနာ
Windows ကို 10 ပိုလျှံ bandwidth ကိုစားသုံးမှုပြဿနာ
Windows မှာ 10 ပုံမှန်အားဖြင့် enabled ကြောင်း Delivery သင့်မြတ် feature ကို Update. ထိုပြဿနာကိုဤလုပ်ငန်းကိုအလိုအလျောက်အခြား Windows မှ updates တွေကိုထုတ်လွှင့်မှအတွင်းအိမ်ရှင်ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်ကို bandwidth ကိုအသုံးပြုသည် 10 PC ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများ
Windows ကို 10 အသုံးပြုသူများကို manually လှည့်-off ဖို့ feature ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, အားဖြင့်အရေးပါသောအလှုပ်ရှားမှုများသိသိသာသာ bandwidth ကိုနဲ့ပတ်သတ်တဲ့. Windows Update ကို Delivery သင့်မြတ်ပိတ်ထား, အောက်ပါအချက်များအတိုင်း:
လှမ်း 1: ပွင့်လင်း Settings ကို
လှမ်း 2: က Windows Update ကိုအပိုင်းသွားပြီး
လှမ်း 3: အဆင့်မြင့်ကိုရွေးပါ
လှမ်း 4: ထို updates ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏မည်သို့ Choose ရွေးချယ်ခြင်းကိုရွေးပါ
လှမ်း 5: ပိတ်မှ toggle Set
Windows ကို install စပြီးနောက် 10, အသုံးပြုသူများအတွက် Microsoft ကနေ update တွေကိုရယူပါကြောင်းသတိပြုမိသင့်ပါတယ်, နှင့်မှ updates get နှင့်ငါ့ local network မှာ PC တွေမှပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မှ updates များစေလွှတ်မည်, အင်တာနက်ပေါ်နှင့် PC များ.
Microsoft က Windows Update ကို Delivery customisible feature ကိုသေချာပေါက်နှေးကွေး-down မည်မဟုတ်ကြောင်းဟာ host ကို PC ရဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ဖော်ပြထားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သာကန့်သတ် bandwidth ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်.
#15 Windows ကို 10 connectivity ကိစ္စများကို
Windows ကို 10 connectivity ကိစ္စများကို
တချို့ Windows 10 အသုံးပြုသူများအစက Wi-Fi ကိုပုံမှန်ထွက်ဖြတ်တောက်ကြောင်းစောဒကနေကြတယ်. ဒါဟာဘယ် operating system သို့မဟုတ်စက်နှင့်အတူလူသုံးမများသောမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် Windows ရဲ့မှု 10 ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နှင့်အတူပြဿနာများရှိခဲ့ပါပြီ. ဒါဟာတကယ်တော့ Windows ရဲ့ဗားရှင်းတစ်ဝှမ်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့်လူသုံးမများသောကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး, နှင့်ရိုးရိုးကပြင်နေပြီလို့ရိုးရှင်းသော reboot လုပ်လိုအပ်ပါတယ်. ဤသည်ယခင်က Windows နဲ့ပြဿနာကြီး7နှင့် Windows ကို 8, နှင့်တရားမျှတစွာရိုးဖက်ရှင်အတွက်ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်.
ဒါ့အပြင် Windows ရဲ့တချို့အစောပိုင်းမွေးစားခြင်းဖြင့်အကြံပြုခဲ့သည် 10 က Wi-Fi ကိုခွဲဝေမှုကို disable လုပ်ဖို့သိသိသာသာပိုမိုတည်ငြိမ်စေကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ကြောင်း. ဒါဟာပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်တရားဝင်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကအတည်မပြု, ဒါပေမယ့်က Wi-Fi ကိုပြီးရင် Windows အတွက်ခွဲဝေမှုကို disable လုပ်ဖို့အနေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာလျှင် 10 အတို-သက်တမ်း fix ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
#16 Windows ကို 10 မတည်မြဲသော Wi-Fi ကို, နှေးသော, သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်မည်မဟုတ်
Windows ကို 10 မတည်မြဲသော Wi-Fi ကို, နှေးသော, သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်မည်မဟုတ်
Windows ရဲ့အဖြေတွေအများကြီး 10 အသုံးပြုသူများက Wi-Fi ကိုအတူကိစ္စများကိုသတင်းပို့ကြသည်. အချို့လူများအတွက်ကနှေးကွေးနေင်သို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကွန်နက်ရှင်ကို drop, အခြားသူများမှာအားလုံးလုပ်ကိုင်ဖို့ဒုက္ခက Wi-Fi ကိုရတဲ့ရှိခြင်းနေကြတယ်.
နောက်တဖန်အချွတ်နှင့်အပေါ်သင့် router နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာလှည့်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ.
သင်သည် Wi-Fi ကိုမှာအားလုံးအလုပ်လုပ်ရမနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့သင်ကကားမောင်းသူပြဿနာရှိစေခြင်းငှါ,. သင့် network adapter ကိုထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူစစ်ဆေးနှင့်သင်နောက်ဆုံးပေါ်ယာဉ်မောင်းများသေချာအောင်. သင်က USB flash drive ကနေတစ်ဆင့်အခြားကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒေါင်းလုဒ်ကြောင့်တပ်ဆင်ရန်ရှိစေခြင်းငှါ,.
သင့် router လည်းနောက်ဆုံးပေါ် Firmware ကိုရှိတယ်လို့သေချာပါစေ. သင်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ website မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ကိုသွားပါ Settings ကို > ကွန်ရက်အဖွဲ့ & အင်တာနက် > ဝိုင်ဖိုင်. ယင်းကြောင်းသေချာပါစေ အလိုအလျှောက်ချိတ်ဆက်ပါ box ကသင်ဆက်သွယ်ချင်တဲ့ကွန်ယက်ဓြှု.
ကိုသွားပါ Settings ကို > ကွန်ရက်အဖွဲ့ & အင်တာနက် > ဝိုင်ဖိုင် > Wi-Fi နဲ့ settings တွေကို Manage > လူသိများသည့်ကွန်ယက်များကိုစီမံခြင်း နှင့်သင့် network ကိုရွေးချယ်ပါ, ထို့နောက်ကိုနှိပ်ပါ မေ့လျော့တော်. စက် reboot နှင့်လတ်ဆတ်သောချိတ်ဆက်ဖို့ကွန်ယက်ကအသေးစိတ်ရိုက်ထည့်ပါ.
#17 Windows ကို 10 အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ရှယ်ယာသင့် Wi-Fi ကို
Windows ကို 10 အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ရှယ်ယာသင့် Wi-Fi ကို
အဆင်ပြေများနှင့်လုံခြုံရေးအကြားတွေ့ရှိခံရဖို့ချိန်ခွင်အမြဲရှိပါတယ်, သို့သျောအခြို့လူ Microsoft ကအသစ်က Wi-Fi ကို Sense သည်အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူမှတ်သား overstepped သိရသည်ခံစားရပါတယ်. အခြေခံစိတ်ကူးကသင့် Wi-Fi ကိုစကားဝှက်ကိုဝေမျှဖို့ဟာလွယ်ကူပြီးအလိုအလျောက်လမ်းကမ်းလှမ်းကြောင်း (အပြည့်အဝစာဝှက်ထားတဲ့) အဆက်အသွယ်ကို outlook ကနေစို့နှင့်အတူ, Skype ကို, သို့မဟုတ် Facebook. အဆိုပါပြဿနာသင်သည်သင်၏ Facebook က "သူငယ်ချင်း" အသီးအသီးမှသင့် Wi-Fi ကွန်ယက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသနားတော်မူရန်မလိုစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်.
ကိုသွားပါ Settings ကို > ကွန်ရက်အဖွဲ့ & အင်တာနက် > ဝိုင်ဖိုင် > Wi-Fi နဲ့ settings တွေကို Manage နှင့်သင်ပယ် sharing network ကို toggle နိုင်, သို့မဟုတ် Outlook ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်, Skype ကို, သို့မဟုတ် Facebook.
သင်တို့သည်လည်းဤသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်အားဖြင့်မျှဝေကွန်ရက်များချိတ်ဆက်ရန်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်, အရေးကြီးသောအရာ, သောကြောင့်,, Microsoft ကပြောပါတယ်အဖြစ်, "ကိုအောကျမေ့, အားလုံးက Wi-Fi ကွန်ယက်လုံခြုံမှုရှိကြပါတယ်။ "
သင့်ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ကုမ္ပဏီ network အကြောင်းပါခဲ့လျှင်, သို့မဟုတ်သင့် network ပေါ်မှာတခြားသူတွေနေရာတွင်ကျော်ကြားမဟုတ်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်လည်းသင့် network နာမတော်ကိုစာသား "_optout" add နိုင်ပါတယ် (SSID), ဒါပေမယ့် Microsoft သင့် network က Wi-Fi ကို Sense သည်များအတွက်ရွေးချယ်-ထွက်စာရင်းထည့်သွင်းခံရဖို့တွေအတွက်ကြောင့်ရက်ပေါင်းများစွာယူနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်.
#18 Windows ကို 10 Bluetooth ကိုအလုပ်မလုပ်
Windows ကို 10 Bluetooth ကိုအလုပ်မလုပ်
တော်တော်အနည်းငယ် Windows ကို 10 အသုံးပြုသူများဒုက္ခ Bluetooth ကိုစနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတော့ရှိခြင်းနေကြတယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ကီးဘုတ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်, ကြွက်, နားကြပ်, အခြားသောဘာမှ Bluetooth မှတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်မည့်.
ကိုသွားပါ Settings ကို > devices နှင့်သေချာပါစေ ဘလူးတုသ် အပေါ် toggled ဖြစ်ပါတယ်.
သင့်ရဲ့ Bluetooth ကိုအပြည့်အဝတာဝန်ခံဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်နှင့်သင်ကတွဲဖက် process ကိုအောက်ပါကြသည်ကြောင်းကိုသေချာပါစေ. တခါတရံတွင်သင်သည် device ကိုရှာဖွေစေတဲ့ခလုတ်ကိုကဆင်းကိုင်ရှိသည်. အသေးစိတ်ကိုထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူစစ်ဆေး.
ဒီယာဉ်မောင်းပြဿနာသောကျိုးကြောင်းဆီလျော်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်. သင်နောက်ဆုံးပေါ်ယာဉ်မောင်းများကြောင့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူစစ်ဆေးချင်ပါလိမ့်မယ်, သင်က Windows ကနေဖြောင့်ခုန်နေတာအထူးသဖြင့်ဆိုရင်7ရန် 10.
device ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်း uninstall လုပ်သင်တို့နှင့်ပြဿနာရှိခြင်းနေသောလူအနည်းငယ်ကဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ, သင့်ရဲ့စက်ကို reboot လုပ်, ပြီးတော့ Microsoft ကအလိုအလျောက် detect နှင့်ယာဉ်မောင်းကို install အသိပေးထိုလှည့်ကွက်ပွုပါမညျ.
#19 Windows ကို 10 printer တုံ့ပြန်မ
Windows ကို 10 printer တုံ့ပြန်မ
အကယ်., အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်, သင့်ရဲ့ပရင်တာအလုပ်မလုပ်ကြောင်းသင်တွေ့, သင်တပြင်လုံးကို installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်စဖို့မှရှိစေခြင်းငှါ.
ချောမွေ့စွာဆက်သွယ်မှုသေချာစေရန်အလို့ငှာ, အရာအားလုံး, ဟာ့ဒ်ဝဲပါလာတဲ့တည်းဟူသောယာဉ်မောင်း, အဆင့်မြှင့်တင်ရေး၏ကြိုတင် updated သင့်ပါတယ်. သင် Windows နဲ့သဟဇာတမယ့်တစ်ဦးပရင်တာကိုသုံးနေတာသေချာပါစေ 10.
#20 Windows ကို 10 Windows Store ဖွင့်လှစ်မပေးနိုငျသို့မဟုတ် apps များ download လုပ်မရဘူး
Windows ကို 10 Windows Store ဖွင့်လှစ်မပေးနိုငျသို့မဟုတ် apps များ download လုပ်မရဘူး
လူအများကြီးကို Windows မှအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် Windows Store နှင့်အတူပြဿနာများသို့ run နေကြပါသည်သော်လည်းကြောင့်ပုံ 10. အချို့လူတို့အဘို့မှာအားလုံးဖွင့်လှစ်မည်မဟုတ်, အခြားသူများသည်အမှန်တကယ် apps ဒါမှမဟုတ် app ကို update တွေကို download လုပ်မဖြစ်နိုင်သက်သေင်. ထိုနှောင့်နှေး app ကိုဒေါင်းလုပ်နှင့် updates ကိုအလုပ်ရှုပ်ဆာဗာများ၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်, သင်တို့မူကားကြိုးစားနိုင်မယ့်အရာတွေရှိပါတယ်:
စာနယ်ဇင်းများ Windows ကို + R ကို ပြီးတော့ရိုက်ထည့် exe box ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းအတွက် ဝင်ရောက်. ကအလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုလျှင်ထို့နောက်သင့်ကို download တန်းစီပယ်ဖျက်ပြီးအဖန်ဖန်ကြိုးစား. တချို့လူတွေကကြောင့်အနည်းငယ်ကြိုးစားပြီးပြီးနောက်သူတို့အဘို့အလုပ်လုပ်သောသတင်းပို့.
သင်တို့ရှိသမျှသည်မှာက Windows Store ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမစနိုင်မယ်ဆိုရင်သင်မမှားဒေသထားပြီမို့ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ကိုသွားပါ Settings ကို > အချိန် & ဘာသာစကား နှင့်သေချာသင်အတွက်အမှန်တကယ်ဖွင့်တိုင်းပြည်ကသတ်မှတ်စေ.
ဒါ့အပြင်ကျမမှန်ကန်အချိန် setting ကိုမှမဟုတ်ပါဘူးသေချာအောင်လုပ်ထိုက်တန်ရဲ့. တစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ Settings ကို > အချိန် & ဘာသာစကား ထိုသို့အားလုံးမှန်ကြည့်သေချာအောင်.
#21 Windows ကို 10 အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည့်အခါအစွန်းဂီတ stream မည်မဟုတ်
Windows ကို 10 အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည့်အခါအစွန်းဂီတ stream မည်မဟုတ်
Edge တစ် universal app ကိုသောကြောင့်,, ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည့်အခါ၎င်း၏လုပ်ရပ်များကိုဆိုင်းငံ့နေကြ. သင်ကဂီတ streaming တဲ့အခါဒါကတကယ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်.
ဒီကိုမခံမ fix ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ရိုးရှင်းစွာသင်အခြားကိစ္စများအတွက်သင့်ရဲ့ device အသုံးပြုနေစဉ်ကနားထောငျဖို့စီစဉ်လျှင်အခြားအရင်းအမြစ်ကနေသင့်ရဲ့ဂီတ stream ရှိသည်.
#22 Windows ကို 10 လှည် touchscreen မျက်နှာပြင်
Windows ကို 10 လှည် touchscreen မျက်နှာပြင်
Windows ကို previewing အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် 10 ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်မှာထိတွေ့မျက်နှာပြင်စွမ်းရည်အဖြစ်အလိုလို functional သူတို့ဖြစ်သင့်သည်အဖြစ်မဖြစ်ကြောင်းကိုပြော. ဥပမာအားဖြင့်, ကဆွဲယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတစ် window ၏အစွန်းလက်လွတ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်, နှင့် icons များအချို့သင့်လက်ညှိုးကို pad နှင့်အတူဆုပ်ကိုင်လွန်းသေးငယ်.
ကံမကောင်းသဖြင့်, ဒီသားရဲ့သဘောသဘာဝဖြစ်ပါသည်. အများကြီးအခြားအလေ့အကျင့်ထက်သင်သည်ဤ finicky ပြဿနာကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်မည်ကိုတကယ်ရှိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး.
#23 Windows ကို 10 အနှောက်အယှက်တဲ့ pop-ups
Windows ကို 10 အနှောက်အယှက်တဲ့ pop-ups
နောက်ဆုံး, လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူများကြိုးစားနေသောအခါ Windows ကို install လုပ်ဖို့ဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ 10 သူတို့တစ်ဦးအထူးသဖြင့်နာကျင်ကျိန်းစပ်သတင်းစကားရင်ဆိုင်နေရတဲ့နေသော. ဤသည်ကို pop-up window ကိုမည်သည့်ဆော့ဝဲကုမ္ပဏီအစဉ်အ၎င်း၏အသုံးပြုသူမဆိုကမ်းလှမ်းထားကြောင်းအနည်းဆုံးအထောက်အကူအကြံဉာဏ်အချို့ကမ်းလှမ်း. မေးခွန်းထဲမှာဒိုးကိုရိုးရှင်းစွာ "အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်" ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်, ပြီးတော့သူကတစ်စောင်အားဖြင့်ဒီအယူအဆအပေါ်အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုစီစဉ် “တစ်ခုခုဖြစ်ပျက် – Microsoft က – တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ "
သဘာဝကဤဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်အများကြီးထိုရယ်မောရွှင်လန်းခြင်းနှင့် meme-ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်သိရသည်, ဒါပေမယ့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာနှင့်ရွှင်မြူးခြင်းရှိနေပေမဲ့လူများစွာကဒီအမှားကနေဆင်းသက်လာကြပြီ, အလေ့အကျင့်အတွက်တကယ့်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး. ဤပြဿနာ Circumnavigating ရိုးရိုးဆော့ဖ်ဝဲ uninstall လုပ်နှင့် reinstalling တစ်ဦးအမှုဖြစ်ပါသည်, နှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏လွှမ်းမိုးသောအများစု၌ဤအမှန်အတိုင်းပြောရရင်အနှောက်အယှက်သတင်းစကားမျှထပ်ခါတလဲလဲရှိပါသည်.
#24 Windows ကို 10 အတင်းအဓမ္မ updates ကို junkware သည်ပေါ်တယ်ဖန်တီး
Windows ကို 10 အတင်းအဓမ္မ updates ကို junkware သည်ပေါ်တယ်ဖန်တီး
Windows ကို 10 ဒါကြောင့် system ကို updates ကိုမှကြွလာသောအခါသုံးစွဲသူများကတစ်ဦးရွေးချယ်မှုအားမပေးပါဘူး. ဒါဟာအလိုအလျှောက်သူတို့ကိုလက်ခံ. တယောက်လက်တွင်ဤကွန်ပျူတာလျြောညီစှာထားတဲ့ update များကို၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ကူညီရင်း. ထို့ပြင်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးအတွက်ပြင်ဆင်ဖာထေးအပေါ် up to date ဖြစ်နေကြောင်းသေချာ, ဒါပေမယ့် Automatic Updates ကြောင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ကို PC သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း device ပေါ်သို့လိုလားနီးပါးသမျှ-feed ကိုတွန်းအားပေးရန်အတွက် Microsoft နိုင်ပါတယ်.
ဒီရန်မ fix ကယ့်ရှိပါတယ်, သင်က Windows ပေါ်မဟုတ်လျှင် 10 enterprise, အသုံးပြုသူများ updates ကိုခွင့်ပြုသို့မဟုတ်ငွငျးပယျနိုင်တယ် Microsoft ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်.
#25 Windows ကို 10 နောက်တဖန်အခမဲ့မဟုတ်
Windows ကို 10 နောက်တဖန်အခမဲ့မဟုတ်
ဒါဟာသိပ်ပြဿနာတစ်ခုကနူးညံ့သိမ်မွေ့သတိပေးချက်ကိုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး. Windows ကို 10 အခမဲ့အဆင့်မြှင့်အဖြစ်သာတစ်နှစ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်. အဲဒီနောကျမှာကရောင်းချပေး $119.
တစ်နှစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာတူခံစား, ဒါပေမယ့်နည်းပညာကမ္ဘာထဲမှာမျက်စိတစ်မှိတ်င့်, ဒါကြောင့်လည်းရှည်သည်ပယ်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဒီကိုမတင်ပါဘူး … ကိုယ့်ရှည်လုံလောက်စွာကနဦး kinks ထွက် ironed ရစေ.
ပြတင်းပေါက် Windows ကို 10 Previous PostSamsung ရဲ့ Next ကိုက Galaxy စမတ်ဖုန်းသြဂုတ်လ 13 ရက်နေ့မှကြေညာမည်Next Post Caseguru ထုတ်ကုန်များကိုသင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဒါ့အပြင် Amazon.com ရယူနိုင်ပြီဖြစ်လိမ့်မည်! Related Posts
15 ဆမ်ဆောင်းရဲ့ Galaxy S6 / S6 Edge နှင့်အတူပြဿနာများ – သူတို့ကို Fix လုပ်နည်း
ဇူလိုင်လ 4, 2015
က Galaxy S6 အစွန်း Iron Man လီမိတက် Edition ကို – တာဝန်ရှိသူတဦးက Unboxing
ဇူလိုင်လ 1, 2015
iPhone ကို6၌ပြုကြ Screen ကအစားထိုး5မိနစ်
ဇွန်လ 25, 2015
Samsung က Galaxy S3 ကို Glass ကို Screen ကအစားထိုးပြုပြင်ရေးပြောင်းရန်
မူပိုင်ခွင့် 2015 Caseguru Inc | မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်